Forscene ကို Reseller နည်းဗျူဟာအသစ်ဖြင့်အာရှပစိဖိတ်ဒေသတွင်တိုးချဲ့ရန် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » နယူး Reseller မဟာဗျူဟာနှင့်အတူအာရှပစိဖိတ်ဒေသကြီးအတွင်းရှိ Expand မှ Forscene သတ်မှတ်မည်
နယူး Reseller မဟာဗျူဟာနှင့်အတူအာရှပစိဖိတ်ဒေသကြီးအတွင်းရှိ Expand မှ Forscene သတ်မှတ်မည်
လန်ဒန် - မေလ 28, 2015 - နောက်ထပ်၎င်း၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုခြင်းကိုချဲ့ထွင်၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ, Forsceneအဆိုပါအာရှဈေးကွက်အတွက်တားမြစ်ထား Technologies ကကစင်္ကာပူအခြေစိုက်အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာန်ဆောင်မှုများ (ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသော) နဲ့တစ်ဦးပြန်လည်ရောင်းချသူများသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်ဟုယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါသဘောတူညီချက် 2015 မှာအစပျိုးသစ်ကိုမိတ်ဖက်တစ်ဦးစီးရီးတစ်ခုဖြစ်တယ် NAB ပြရန် ပြီးနောက်တားမြစ်ထားအသစ်တစ်ခုကိုအကောင်အထည်ဖော် Forscene ပြန်လည်ရောင်းချသူများမဟာဗျူဟာယခုနှစ်အစောပိုင်းက။
1995 အတွက်စင်္ကာပူ၌တည်, ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသော '' အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသံလွှင့်လုပ်ငန်းများအားကောင်း, ယုံကြည်စိတ်ချရသောဒီဇိုင်းနှင့်စနစ်အပေါင်းစည်းမှုများကိုရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော, ယုံကြည်စိတ်ချရသော, On-အချိန် turnkey ဖြေရှင်းချက်ပေး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်အတူပစ္စည်းကိရိယာများ setup ကို, တပ်ဆင်ခြင်း, စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ဝ, ထုတ်လွှင့်ဖို့အသံလွှင့်အတိုင်ပင်ခံစနစ်ဒီဇိုင်းနှင့်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုကနေအထိန်ဆောင်မှုများဖြည့်စွက်ရန်ကု သ. မရသော။ clients AETN အာရှ, ခြုံငုံမီဒီယာ, HBO အာရှနှင့် MediaCorp ပါဝင်သည်။
"ကျနော်တို့က cloud အခြေခံတည်းဖြတ်ရေးဖြေရှင်းချက် Post-ထုတ်လုပ်မှု၏အနာဂတ်မှာဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်," ကို Justin Teo, ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောအရောင်းညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။ "Forscene ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိပူဇော်သက္ကာကိုဖြည့်ထားတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ workflow နှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများမိုဃ်းတိမ်ကိုစီးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များမိတ်ဆက်မစောင့်နိုင် Forscene။ "
ရဲ့တားမြစ်ထားသစ်ကို Forscene ပေးပို့စ်အိမ်များ: ပြန်လည်ရောင်းချသူများအစီအစဉ်သုံးခုပြန်လည်ရောင်းချသူများအမျိုးအစားအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ် Forscene သူတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှု clients များ, ထည့်သွင်းကြောင်းပေါင်းစည်းရန်ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် Forscene သည်အခြားနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ကိုယ်စားပြုကြောင်းရိုးရာပြန်လည်ရောင်းချသူများသို့ Forscene နယ်မြေများတွင်ရှိရာဘာသာစကားနှင့်ဒေသခံအသိပညာသော့ချက်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအမျိုးအစားထဲမှာကြီးထွားမောင်းထုတ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေတဲ့စက်ချုပ်လုပ်ငန်းကိုမော်ဒယ်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဖွဲ့စည်းပုံရှိပါတယ် Forscene ကမ္ဘာတဝှမ်းဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်း။
"ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောတူသောဒေသဆိုင်ရာပြန်လည်ရောင်းချသူများကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးချဲ့အစီအစဉ်များကိုအဓိကနေကြတယ်" ဟုဂျေဆန် Cowan, Forbidden မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။ "ဒေသတွင်း၌အကြှနျုပျတို့၏ပြန်လည်ရောင်းချသူများအားထုတ်မှုမှကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသော '' ဒေသခံစက်မှုလုပ်ငန်းအသိပညာနှင့်အဆက်အသွယ်ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်များမှာ Forscene စင်္ကာပူအတွက်ဦးဆောင် cloud-based Post-ထုတ်လုပ်မှုပလက်ဖောင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ "
ဒီ nonexclusive သဘောတူညီချက်မှာတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောနှင့် Techtel နှစ်ဦးစလုံးအားကိုယ်စားပြုပါလိမ့်မယ် Forscene ဒေသတွင်း၌။
အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက Forscene www မှာတှေ့နိုငျပါသညျ။forscene.com ။
တားမြစ်ထားတဲ့မီဒီယာချမှတ်သူများနှင့်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် high-performance ကိုမိုဃ်းတိမ်ကိုဗီဒီယိုကန်ဆောင်မှုကယ်တင်တတ်၏။ သူ့ရဲ့ flagship ထုတ်ကုန်, Forscene, ဖြန့်ဝေဖို့ဖန်တီးမှုကနေလုံးဝအသစ်အ Workflows powering, ကမ္ဘာ့အများဆုံးအဆင့်မြင့် cloud-based ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုဖြစ်ပါတယ်။ လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်ကိုးကား, High-profile ကိုမီဒီယာနှင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီများနှင့် Forbidden မိတ်ဖက်ယင်း၏မိုဃ်းတိမ်သည်အခြေခံအဆောက်အဦများဖြည့်နှင့်၎င်း၏ဖောက်သည် သာ. ကြီးမြတ်တန်ဖိုးနှင့်ထိရောက်မှုများကို။
ဗီဒီယိုကို Link ကို: www.youtube.com/watch?v=JN59woBVxRo&feature=youtu.be#t=06m30s
caption: Jason Cowan များအတွက်သစ်ကိုပြန်လည်ရောင်းချသူများမဟာဗျူဟာဆြေးြေိံး Forscene.
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Forbidden/Logo_BES.jpg
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Forbidden/Forbidden-NABResellermeeting.jpg
caption: Forscene ပြန်လည်ရောင်းချသူများသစ်ကိုပြန်လည်ရောင်းချသူများမဟာဗျူဟာအကြောင်းကိုထွက်ရှာတွေ့မှယခုနှစ်အစောပိုင်းက NAB မှာစုဝေးစေတော်မူ၏။
2015 NAB ပြရန် 2015 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2015 NAB ပြရန်သတင်းများ ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသော ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း ပိတ်ပင်ထားသော FORscene NAB 2015 NAB ပြရန် Show ကို 2015 NAB NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB15 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-05-30
ယခင်: Artel ဗီဒီယိုစနစ်များအမည်များကိုသမ္မတအဖြစ်သူ Mike Rizzo
နောက်တစ်ခု: ရေဒီယိုAlgérienneအားလုံးသည်ဆိုဒ်များတစ်ဝှမ်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, အသုံး Boost မှ NETIA ရေဒီယို-Assist ဖြန့်ကျက်များတိုးချဲ့ခြင်း